Isbedelka Cimilada Boosaaso iyo ka ganacsiga Biyaha Qabow ee la cabo+Sawiro – SBC
Xiligan la joogo magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waa magaalo uu isbedel ku yimid cimiladeeda, waxaana bilowday Xagaagii, iyadoo uu sii kordhayo si tartiib tartiib ah kuleylkii lagu yiqiin kala bar sanadkiiba.
Qof walboo Socod ku maraya gudaha Magaalada waxaa ka muuqanaya dhidid aad u farabadan, waxaa gubeysa qoraxda, waxayna danta kugu qasbeysaa in aad hesho biya qabow iyo goob aad ku nasato.
Sidaasi Awgeed waxaa magaalada ku soo batay ka ganacsiga biyaha ama Cabitaanka Qeybahiisa kala duwan, waxaadna arkeysaa dad horay uga shaqeysan jiray ganacsiyo kala duwan oo u bedeshay iibinta Biyaha qabow siiba Cabitaanka noocyadiisa kala duwan.
Mar aan maanta socod gaaban ku tagay gudaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso ayaa waxaan kula kulmay Anigoo aad u kulul dhidid badanna uu iga muuqdo nin horay aan ugu aqiin Ganacsi kale oo ka shaqeynaya Biyaha kaas oo aan ku leexday anigoo doonaya in aan biyo ka cabo .
Waxaan weydiiyay Su’aalo ninkii Su’aalo kooban oo ay ka mid aheyd waxa ku kalifay isbedelkan Ganacsi ee uu ku dhaqaaqay, isagoo iisheegay in xiligan oo kale sanadwalba uu isbedelka caadi ka yahay Boosaaso maadaama uu bilowdo Kuleylka Xagaaga.
Waxa uu intaasi ku daray Ganacsadahan in Ganacisigiisii hore xiliyadan marka lagaaro uu ka faaiido badto ka ganacsiga Biyaha sidaasi awgeedna ay u bedelmaan ganacsiyada qaar.
Marka aad dhexmareyso Suuqa waxaad arkeysaa talaabo kasta oo aad qaato miis ama Gaariyoole noocyada gacanta lagu riixo oo ay ku dul sameysantahay Talaagad(Tarmuus) noocyada waaweyn kuwaas oo ay ku jiraan Biyo qabow ama cabitaan, waxaa bar bar yaala galaasyo, qof ama labo ayaa dultaagan oo biyo ka cabaya.
Heer kulka magaaladu Waaa mid aad u sareeya xiliyada gelinka hore ee maalintii, waxaanu mararka qaar uu gaaraa heer kulku 41/45, walise waa bilow oo lama gaarin bilihii xagaaga ee rasmiga ahaa kuwaas oo badi dadka magaaladu ka baxaaan ugana baxaan deegaanada kale ee Puntland.
SQ: Maxamed Jabra